Xoriyada Blog | Martech Zone
Markaan ka fikirno saxaafadda casriga ah, waxaan ka fikirnaa shirkadaha bahalnimada ah ee warbaahinta ee dejiyay anshaxa, heerarka iyo ku dhaqanka. Iyaga dhexdooda waxaan ka heli karnaa xaqiiq-hubiyayaal, saxafiyiin jaamacad wax ku bartay, tafatirayaal khibrad leh iyo kuwa wax daabaca oo awood badan. Intooda badan, wali waxaan fiirineynaa saxafiyiinta inay yihiin kuwa runta ilaaliya. Waxaan ku kalsoonahay inay ku guuleysteen dadaalkooda saxda ah markay baarayaan iyo ka warbixinayaan sheekooyinka.
Hadda baloogyada internet-ka ayaa ku faafay oo qof waliba xor buu u yahay inuu soo bandhigo fikirkiisa, qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ayaa su’aal ka qaba in iyo in kale xorriyadda saxaafadda waa inuu dalbadaa baloogyada. Waxay u arkaan faraq u dhexeeya saxaafadda iyo blogga. Waa wax aad u xun in siyaasiyiinteennu aysan baran taariikhda, in kastoo. Wax-ka-beddelka Koowaad waxaa la qaatay bishii Diseembar 15, 1791, iyada oo ka mid ah tobanka wax ka beddel ee ka kooban Sharciga Xuquuqda.
Shirweynuhu ma samaynayo sharci ku saabsan aasaasidda diinta, ama mamnuucaya ku-dhaqanka xorta ah; ama soo gaabinta xorriyadda hadalka, ama saxaafadda; ama xaqa ay dadku u leeyihiin inay si nabad ah isugu yimaadaan, oo ay ka codsadaan dowladda inay wax ka qabato cabashooyinka.
Wargeyskii ugu horreeyay ee Dunida Cusub wuxuu ahaa Dhacdooyinka Dadweynaha, 3 bog oo qoraal ah oo si dhakhso ah loo xiray maaddaama aysan oggolaanin wax maamul ah. Waa tan sida wargeysku u ekaa.
Dhamaadka dagaalka 1783 waxaa jiray 43 wargeys oo daabacan. Kuwani intooda badani waxay ahaayeen wargeysyo faafiya dacaayad, runtiina si daacadnimo ah looma sheegin, waxaana loo qoray si kor loogu qaado xanaaqa gumeystaha. Kacaanku wuu imanayay oo blog-ka saxaafaddu si dhakhso leh ayey fure ugu noqotay faafinta ereyga. Boqol sano kadib, waxaa jiray 11,314 waraaqo oo kaladuwan oo laga diiwaangaliyay tirakoobka 1880. Markay ahayd 1890-kii wargeyskii ugu horreeyay ee hal milyan oo nuqul garaaca ayaa soo ifbaxay. Qaar badan oo ka mid ah ayaa laga daabacay maqsinno waxaana lagu iibiyey dinaar maalintii.
Si kale loo dhigo wargeysyada asalka ah waxay aad ugu ekaayeen baloogyada aan maanta aqrinayno. Iibsashada saxaafad iyo qoritaanka wargeyskiinu uma baahna waxbarasho gaar ah iyo rukhsad la’aan. Markii ay saxaafadda iyo saxaafaddu is beddeleen, ma jiraan wax caddeyn ah oo muujinaya in qoraalku ka fiicnaaday ama xitaa inuu daacad ahaa.
Saxafi Jaale qabsatay Maraykanka ilaa maanta. Warbaahinta warbaahintu badanaa siyaasad bay u xaglisaa waxayna u isticmaashaa dhex-dhexaadiyayaashooda si ay u sii wadaan faafinta eexdaas. Iyadoon loo eegin eexashada, dhammaantood waa lagu ilaaliyaa sida ku cad Wax-ka-beddelka Koowaad.
Taasi maaha in la yiraahdo ma ixtiraamo suxufiga. Aniguna waxaan rabaa wariyenimadu inay noolaato. Waxaan aaminsanahay in wacyigelinta suxufiyiinta inay baaraan, ay isha ku hayaan dawladeena, shirkadahayada iyo bulshadeena inay ka adagtahay sidii hore. Bloggers badanaa ma sameeyaan qoditaanka qoto dheer (in kasta oo taasi isbeddelayso). Waxaan badiyaa iska saareynaa dulucda mowduucyada halka saxafiyiinta xirfadleyda ah la siiyo waqti badan iyo ilo si ay u qoto dheeraadaan
Uma kala soocayo ilaalinta saxaafadda iyo tan dadka wax qora. Cidna ma tusi karto xariiqda halka ay ku dambayso saxaafadda iyo balooggu ku bilaabmayo. Waxaa jira baloogyo cajiib ah oo leh waxyaabo si muran la’aan ah loo qoro oo si qoto dheer loo baaray marka loo eego qaar ka mid ah qodobbada aan ka aragno xarumaha wararka casriga ah. Mana jiraan wax kala soocaya dhexdhexaadinta. Wargeysyada hadda waxaa laga akhriyaa khadka tooska ah in ka badan inta ay ku qoran yihiin khadadka iyo warqadda.
Siyaasiyiinteena casriga ahi waa inay garwaaqsadaan in blogger-ka casriga ahi uu aad ula mid yahay saxafiyiinta ilaalada helay 1791 markii wax ka bedelkii koowaad la ansixiyay. Xorriyaddaasi kuma saabsana doorka qofka ereyada qoraya sida ay u badan tahay ereyada laftooda. Ayaa ah -saxaafadeed ma dadka mise dhexdhexaad? Waxaan soo gudbinayaa inay tahay ama labadaba. Ujeedada ilaalintu waxay ahayd in la hubiyo in qofkasta uu la wadaagi karo fikirkiisa, figradiisa iyo xitaa ra'yigiisa bulshada xorta ah… kumana qasbin ilaalinta kaliya runta.
Waxaan u ahay xorriyadda saxaafadda, iyo ka-hor-tagga dhammaan ku xadgudubka Dastuurka in lagu aamuso xoog oo aanan sabab u ahayn cabashooyinka ama dhaleeceynta, caddaaladda ama caddaalad-darrada, ee muwaadiniinteenna looga soo horjeedo anshaxa wakiilladooda. Thomas Jefferson
Siyaasiyiinteena casriga ahi waxay su aal ka keenayaan xorriyadda barta sababta ay awoowayaasheen u doonayeen inay saxaafadda ku ilaaliyaan wax ka beddelka koowaad.